Muqtaar Roobow oo Baydhabo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Muqtaar Roobow oo Baydhabo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax
Muqtaar Roobow oo Baydhabo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax
Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Roobow ayaa saaka ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho, waxaana magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan oo ka kooban masuuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Muqtaar Roobow ayaa garoonka waxaa lagaga soo galbiyay gaadiid kuwa gaashaaman ah, iyada oo inta badan garoonka iyo xaafadaha ku dhaw uu kula soo lugeeyay dad fara badan, waxaana sheeda kala socday ciidamo badan oo ammaankiisa sugayay.
Dad badan ayaa aaminsan in Muqtaar Roobow uu door wacan ka sameyn karo loolanka doorasho ee ka dhacaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Bartamaha bisha soo socota ayaa magaalada Baydhabo waxaa la qorsheynayaa inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, taasi oo ay ku tartamayaan musharaxiin badan oo uu ka mid yahay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Valadamir Putin oo Soomaaliya u rajeeyay inay guul ka gaarto la-dagaalanka argagixisada
Xukun lagu riday Askar kufsi u geystay Gabar 13 jir ah
Valadamir Putin oo Soomaaliya u rajeeyay inay guul ka gaarto la-dagaalanka...
Sirdoonka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay dagaalka TPLF ee Itoobiya
Lafta-gareen oo la kulmay guddiyada doorashooyinka dalka